Free Ụzọ naghachi Data on iOS Ngwaọrụ nọ Mac OS X Mavericks
> Resource> iOS> Free Ụzọ naghachi Data on iOS Ngwaọrụ nọ Mac OS X El Capitan
Nwere furu efu data na gị iOS ngwaọrụ? Ị na-na na-nri ebe ugbu a. Isiokwu a na-aga ịkọrọ gị na ụfọdụ free ụzọ naghachi iOS data na Mavericks. Na-agụ na na-agbalị ụzọ adabara gị.
Free usoro 1: Naghachi iOS data na Mavericks si iTunes ndabere
Free usoro 2: Naghachi iOS data si iCloud
Ọtụtụ n'ime iOS ngwaọrụ ọrụ agbasaghị iji iTunes dị ka a data njikwa, ịhazi data na ha iPhone, iPad na iPod aka. Ka a okwu nke eziokwu, iTunes nwere ike igbanye a ndabere maka ọ bụla iOS ngwaọrụ mgbe ị mmekọrịta ngwaọrụ na ya. Na-emekarị, ọ bụla na ngwaọrụ nwere otu ndabere faịlụ. iTunes ga-imelite nkwado ndabere na mpaghara mgbe ị mmekọrịta ngwaọrụ a na ya ọzọ, kama na-amụba a ọhụrụ ndabere faịlụ. Ya mere, i kwesịrị ịkwụsị syncing ngwaọrụ gị na iTunes, ozugbo ị furu efu iOS data.
Ọ bụ nnọọ mfe naghachi iOS data na Mavericks si iTunes ndabere. Soro nzọụkwụ n'okpuru:
Nzọụkwụ 1. Gbanyụọ akpaaka mmekọrịta
Tupu ị jikọọ gị iOS ngwaọrụ na kọmputa, i kwesịrị gbanyụọ akpaaka mmekọrịta mbụ, na-egbochi nkwado ndabere na mpaghara si na-emelitere. Ọ dị mfe: Open iTunes <Gaa Mmasị ... <Pịa Devices. Ego igbe n'ihu nke nkọwa: Prevent iPods, iPhones, na iPads si syncing na-akpaghị aka. Wee pịa na OK bọtịnụ.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iOS ngwaọrụ ma weghachi ya si iTunes ndabere
Ugbu a, ị nwere ike jikọọ na ngwaọrụ gị na Mac enweghị ihe ọ bụla na-echegbu onwe. Mgbe ngwaọrụ gị na-ahụrụ site iTunes, nri pịa Devices menu na n'aka ekpe nke window. Mgbe ahụ ị ga-ahụ ndepụta nke menu. Họrọ na pịa onye a: Weghachi si ndabere .... Mgbe ahụ gị aga na ndabere faịlụ ga-ọkọnọ. Họrọ onye ị chọrọ ma weghachi ya.
Ọ bụrụ na ị na-achọghị iji weghachi dum nkwado ndabere na mpaghara mbà nile dị na data na ngwaọrụ gị, ị nwekwara ike selectively agbake data ị chọrọ n'aka iTunes ndabere, na-agụ ndị nduzi maka ngwaọrụ gị n'okpuru:
N'ihi na iPhone ọrụ N'ihi na iPad ọrụ N'ihi na iPod aka ọrụ
Wepụ iTunes Ndabere maka Your iPhone Weghachi iPad si iPhone ndabere Chọta na-ele iTunes ndabere faịlụ
Weghachi iPhone si iPad ndabere Wepụ iPad ndabere
Ọ bụrụ na ị na mgbe synced gị iOS ngwaọrụ iTunes tupu, ma ọ bụ ị na-adịghị a na-adịbeghị anya ndabere faịlụ, mbụ ụzọ gaghị arụ ọrụ maka gị. Mgbe ahụ ị pụrụ agbalị otú a: naghachi gị iOS data si iCloud.
Nzọụkwụ 1. ihichapu niile ọdịnaya na ntọala na ngwaọrụ gị
Naghachi iOS data si iCloud, i kwesịrị iji tọgharịa ngwaọrụ gị na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ndabere ntọala: Gaa Ntọala <General <Tọgharia. Pịa na nhọrọ nke ihichapu niile ọdịnaya na Ntọala. Mgbe ahụ, pịa ihichapu iPhone n'ịkwado ọrụ.
Nzọụkwụ 2. Weghachi gị iOS data si iCloud ndabere
Mgbe ahụ Malitegharịa ekwentị gị na ngwaọrụ, na-ewere iPhone dị ka ihe atụ ebe a. Ị ga-ahụ na nhọrọ na igosi na ihuenyo gị iDevice. Họrọ nhọrọ nke Weghachi si iCloud ndabere.
Ọ bụrụ na ọ ụzọ n'elu na-arụ ọrụ gị, ị mkpa ịgakwuru-atọ ndị ọzọ software maka enyemaka: kpọmkwem ike iṅomi ngwaọrụ gị naghachi iOS data na Mavericks. E nwekwara ọtụtụ ụzọ. Dị nnọọ họrọ a ndu adabara gị n'okpuru ebe a na pịa njikọ na-agụ ya ugbu a.
Weghachi iPhone si iCloud Undelete na Nnapụta furu efu Data on iPad iPod aka Data Recovery
Naghachi iPhone Data enweghị ndabere iPad Data Recovery Naghachi ehichapụ iPod aka Files
Nwụrụ anwụ iPhone Data Recovery Olee otú Naghachi ehichapụ iPad Undelete Data on iPod aka